Jeannette's take on life: ဝီကီပီးဒီးယား Clement LANG HIRSH SR ၏ဇနီး။
1. တကယ်တော့မူရီရယ် Maxine Jelmeland, AKA Maxine Hudson & Maxine ဂျရုမ်း [26 နိုဝင်ဘာ 1917-07 ဇူလိုင် 2000] ရှမွေလသည် H ကို Jelmeland & Mabel အမ် Lunder [nee '' မစ္စစ်အစိမ်းရောင်] မီတာ၏သမီး။ 24 ဖေဖော်ဝါရီ 1940, Beverly Hills မှာ, Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား, အမေရိကန်နိုင်ငံ div ။ ဒီဇင်ဘာလ 2, 1952 Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား။ Clement Lang Hirsch က Sr; ကိစ္စများ: လင်းကာရယ်လ်, Janice Lang, & Clement "ဟုဦးဘို" Lang ဂျူနီယာ Hirsch က
2. Edith Eyre အကြမ်းဖျဉ်းဖတ် Mcskeinming AKA Edith Mack Hirsch က [15 ဧပြီ 1917- 23 Mar 1985] ဂျိမ်းဝီလျံ Mcskeinming & Ethel Aeyre 1st မီတာ၏သမီး။ 15 ဧပြီ 1954 Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား, အမေရိကန်နိုင်ငံ & div 26 ဖေဖော်ဝါရီ 1963 Jaurez, မက္ကဆီကို Clement Lang Hirsch က Sr; ကိစ္စများ: Gregory Lang Hirsch က 2nd မီတာ။ Edith ၏မင်းသမီး Lucille ဃ Ball ကို EOM မရဏ2Mar, 1963 Clark က, Nev Desiderio Alberto Arnez 3rd AKA ကျူးဘား Band ခေါင်းဆောင် Desi Arnaz အိမ်ထောင်ဖက်ဟောင်း။ 1985 အဘယ်သူမျှမကိစ္စများ:
3. ဂလော်ဒီယာကို Lynn ဟေးလ် AKA မင်းသမီး & စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် [20 ဇန်နဝါရီ 1926] ရောဘတ် Lee ကဟေးလ် & မာရိသည်အယ်လင်မစ် 1st မီတာ၏သမီး။ 27 ဧပြီ 1946 လင်းဒေးလ် Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား, အမေရိကန်နိုင်ငံ EOM: Hugh Clark က၏မရဏ။ လေယာဉ်ပျက်စီးမှု 29 နိုဝင်ဘာ 1961 Fresno ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Hutson II ကို။ ပြဿနာများကို: ဟီလာရီမန်ဒါ & Hugh C. Hutson III ကို။ 2nd မီတာ။ 19 မတ်လ 1963 Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား div ။ 17 ဧပြီ 1973 Los Angeles မြို့နွားသငယ်ကို Clement Lang Hirsch က Sr; ကိစ္စများ: Casey, & ခရစ္စတိုဖာ Hirsch က။ 3rd မီတာ။ 18 သြဂုတ် 1978 Los Angeles မြို့, ကာလီဖိုးနီးယား, EOM ဃ။ မောရစ်ဂျေး Morey Mirkin အဘယ်သူမျှမကိစ္စများ 27 ဇွန် 1985: 0
4. လင်းအေ Allen က [5 ဧပြီ 1939] ရောဘတ် Morton အယ်လန်ဂျူနီယာ & ဗာဂျီးနီးယားဘက်တီ Stoddard ၏သမီး [မစ္စစ် Harvey ဂျုံးစ် Pearson] ။ 1st မီတာ။ 27 သြဂုတ် 1960, လိမ္မော်ရောင်, ကာလီဖိုးနီးယား & div ။ အောက်တိုဘာ 1968 ညျဒါဝိဒျ Livingston ဘားကိစ္စများ: ဘာဘရာ, Tiffany အယ်လ် & Michelle L ကိုအယ်လန်။ 2nd မီတာ။ 23 ဖေဖော်ဝါရီ 1976 Del Mar, San Diego မှကယ်လီဖိုးနီးယားမစ္စတာ Clement Lang Hirsch က Sr; 2000 အမေရိကန်နိုင်ငံ EOM သေခြင်းတရားအဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကို: 0
အလှမယ်လင်းအယ်လန်နာမကို Booth တို့ကမည်သူမဆိုလက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ခဲ့သည်။ နာရေးကျွောငွာစာလုံးပေါင်းမှားယခင်အမည်အားဘားအဖြစ်စာရင်းသွင်းခဲ့ကြသင့်ပါတယ်။ ]] Jeannette K. Rook အားဖြင့်